3 Ɔbea tuatewfo a wagu ne ho fi no nnue, kurow a ɛyɛ nhyɛso!+ 2 Wanyɛ aso antie+ annye nteɛso;+ wamfa ne ho anto Yehowa so+ ammɛn ne Nyankopɔn.+ 3 Ne mpanyimfo yɛ agyata a wɔbobom.+ N’atemmufo yɛ anadwo mpataku, na wonnyaw nnompe mma ade nkye so.+ 4 N’adiyifo yɛ dwae, na nkontompo ayɛ wɔn mã.+ N’asɔfo agu akronkronne ho fi, na wɔabu mmara no kɔn mu.+ 5 Yehowa yɛ ɔtreneeni wɔ ne mu,+ na onni amumɔyɛsɛm.+ Anɔpa biara ɔda n’atemmusɛm+ adi. Na adekyee nso, ɛnsa.+ Nanso ɔbɔnefo nnim aniwu.+ 6 “Mesɛee aman, na wɔn ntwea so aban yɛɛ pasaa. Mesɛee wɔn atempɔn, na obiara amfa so. Wɔn nkurow dan amamfõ; obiara nni mu, na obiara nte hɔ.+ 7 Mekae sɛ, ‘Ɔkwan biara so wubesuro me na woagye nteɛso,’+ na wɔansɛe ne tenabea.+ Mɛma watwa ne bɔne nyinaa so aba.+ Nokwarem no, wɔmaa wɔn nneyɛe dan bɔne+ ntɛm. 8 “‘Enti afei montwɛn me,’+ Yehowa asɛm ni, ‘nkosi sɛ mɛsɔre aba asade no ho,+ efisɛ m’atemmusɛm ne sɛ mɛka aman nyinaa abom+ aboaboa ahenni nyinaa ano, na mehwie m’abufuw,+ m’abufuhyew nyinaa, agu wɔn so. Na m’anibere gya mu na asase no nyinaa bɛhyew.+ 9 Afei mɛdan aman no ano ma wɔaka kasa kronn,+ na wɔn nyinaa bɛbɔ Yehowa din+ na wɔde mmati koro asom no.’+ 10 “Na wɔn a wɔrepa me kyɛw no, kyerɛ sɛ, me nkurɔfo a wɔabɔ wɔn apete no babea, de akyɛde befi Etiopia asubɔnten ho abrɛ me.+ 11 Saa da no, w’ani renwu sɛ woyɛɛ nneɛma de tõõ me mmara,+ efisɛ meyi ahantanfo a wɔhoahoa wɔn ho no afi wo mu;+ na woremma wo ho so bio wɔ me bepɔw kronkron no so.+ 12 Mɛma ahobrɛasefo ne wɔn a wodwo+ aka ama wo, na wɔde Yehowa din bɛyɛ wɔn guankɔbea.+ 13 Na Israel nkaefo+ no de, wɔrenyɛ nea ɛnteɛ biara,+ wɔrenni atoro,+ na wɔrenhu nnaadaa tɛkrɛma wɔ wɔn anom;+ wobedidi adwudwo wɔn ho,+ na obiara renyi wɔn hu.”+ 14 O Sion babea, bɔ ose! O Israel, sɛpɛw wo ho!+ O Yerusalem babea, ma w’ani nnye na fa wo koma nyinaa di ahurusi!+ 15 Yehowa ayi atemmu no afi wo so.+ Wama wo tamfo asan n’akyi.+ Israel hene Yehowa ka wo ho.+ Enti worensuro mmusu biara bio.+ 16 Saa da no, wɔbɛka akyerɛ Yerusalem sɛ: “O Sion, nsuro,+ na mma wo nsam nngow.+ 17 Yehowa wo Nyankopɔn wɔ wo mu. Ɔyɛ otumfoɔ, enti obegye nkwa.+ N’ani begye na wadi wo ho ahurusi.+ Ne dɔ nti, ɔbɛyɛ komm. Na wo nti, ɔde ahosɛpɛw begye n’ani. 18 “Wɔn a wɔn werɛ ahow+ a wonni w’afahyɛ ase no, mɛboaboa wɔn ano;+ wɔnka wo ho, efisɛ n’ahohorabɔ gu wɔn so.+ 19 Saa bere no, mɛkanyan me ho wɔ wɔn a wɔhaw wo no nyinaa so.+ Megye nea ɔtɔ gu ne nan so no+ na maka wɔn a wɔahwete no aboa ano.+ Na mede wɔn bɛyɛ ayeyi ne edin wɔ asase a wɔn anim guu ase wɔ so no nyinaa so. 20 Sɛ meboaboa mo ano saa bere no a, mede mo bɛba. Na sɛ meboaboa mo nnommum ano de wɔn brɛ mo a, mɛma moayɛ edin ne ayeyi wɔ asase sofo nyinaa mu,” Yehowa na waka.+